အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကို ဆန့်ကျင်တော်လှန်နေသော မပြီးဆုံးသေးသည့် နွေဦးတော်လှန်ရေး၏ … – PVTV Myanmar
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကို ဆန့်ကျင်တော်လှန်နေသော မပြီးဆုံးသေးသည့် နွေဦးတော်လှန်ရေး၏ လမ်းခုလတ်တွင် ဂီတအနုပညာရှင် ရေမွန် ကျဆုံးခဲ့ပြီ ဟု သိရှိရသည့် အတွက် PVTV အဖွဲ့သားများအနေဖြင့် ဝမ်းနည်းမိပါကြောင်းနှင့် တော်လှန်ရေးတွင် အသက်ပေးခဲ့ကြသူများအားလုံး၏ စိတ်ဝိဉာဉ်များက ပေးသော အင်အားဖြင့် စစ်အာဏာရှင်အမြစ်ပြတ်သည်အထိ ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သန္နိဋ္ဌာန်ပြုအပ်ပါသည်။
Like – 23K Share – 571
Yan Yan Chin Sat says:
2021-06-23 at 2:48 PM
NUG အနေနဲ့ တောထဲမှာရောက်နေတဲ့သူတွေ လေ့ကျင့်နေတဲ့သူတွေအတွက် ‌ေဆးကုသ‌ေပးမယ့်သူ၊ ဆေး၀ါး‌အမြောက်အများ၊ ဆေးပစ္စည်းကိရိယာတွေ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထောက်ပံ့ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
2021-06-23 at 2:50 PM
Lynn Thwe says:
2021-06-23 at 2:51 PM
Khin Zaw Myint says:
2021-06-23 at 2:52 PM
စိတ်ဖြောင့်ဖြောင့်နဲ့သာ ချန်ခဲ့ ရဲဘော်….💔
2021-06-23 at 2:55 PM
ကျမတို့ပြည်သူတွေရဲ့ နာကျင်မှုတွေ ရင်နဲ့ မဆ့ံတော့ပါဘူး
ကိုေရႊစုိး ကိုေရႊစိုး says:
2021-06-23 at 2:57 PM
Adam Oo says:
2021-06-23 at 3:01 PM
PVTV က မန်းလေးနဲ့ရန်ဖြစ်ထားတာလား။ မန်းလေးကကျဆုံးသွားတဲ့ PDF တွေကိုကြ ဝမ်းနည်းကြောင်းပြောဖို့ မပြောနဲ့ သတင်းအနေနဲ့တောင်မဖော်ခ့ဲပြဘူး။ အေးပါ အေးပါ။
2021-06-23 at 3:09 PM
RIP ပါ ရေမွန်(တွတ်ပီ) 😢😢😢
Tint Tint Khaing says:
2021-06-23 at 3:17 PM
2021-06-23 at 3:18 PM
Rest In Power Raymond 🥲
2021-06-23 at 3:29 PM
RIP ဗျာ 😢😢😢
ခြၽဲစိန္ ေလး says:
2021-06-23 at 3:52 PM
ဝမ်းနည်းတတ်တဲ့ချစ်သူနဲ့ စကြွေခဲ့တာ ထပ်တူဝမ်းနည်းရပါတယ်😭
Kg Htet says:
2021-06-23 at 4:08 PM
အတူတူမင်းနဲ့ရောက်ဖို့ အဆိုးဆုံးတွေ ချန်ရစ်😭
2021-06-23 at 4:09 PM
Mi M M Lwin says:
2021-06-23 at 4:12 PM
It isaheartbreaking to learn. Can’t take it.
Daw Lay Nwe says:
2021-06-23 at 4:18 PM
Daw Angela says:
အိမ္အိုမင္း အိမ္အို says:
2021-06-23 at 5:26 PM
တန္ေန ေသးလို႔ လား
Ah Su says:
2021-06-23 at 8:27 PM
PV tv ခင်ဗျာ
ပြည်သူတွေလည်း တော်လှန်းရေး လုပ်တယ် ၊ အနုပညာ ရှင်တွေ လည်း တော်လှန်းရေး လုပ်တယ် ၊ ပြည်သူ တွေ သေတာ က အနုပညာ ရှင် တွေထက် များ ပါတယ် ၊ မန္တလေး ဖြစ်စဥ် မှာ အသက်ပေး လိုက် ရတဲ့ ကျဆုံး သွားလေ သော PDF တွေ အတွက် ကို လည်း ဓာတ်ပုံ နာမည်နင့်တကွ လေးလေးစားစား သီးသီးသန့်သန့် လေး နင့် အရေးတယူ ဂုဏ်ပြု သင့် ပါတယ် ၊ အနုပညာ ရှင် နင့် ပြည်သူ လူလူ ချင်း အတူတူ ပါ ပဲ ၊
တိမ္ လႊာ says:
2021-06-23 at 8:34 PM
Lv Chui says:
မအလ ကြောင့် ပြည်သူ အမျိုးမျိုး နဲ့ ဒုက္ခ ရောက်နေတာ
Emma Phyo says:
2021-06-23 at 11:39 PM
“ပြောဖို့စကားလုံးတွေ နာကျင်မှာစိုးလို့ တယောက်တည်းရင်မှာ ငါသိမ်းထားတာ….မင်းလေးမသိနိုင်အောင်….”
ဆက်ဆိုပေးပါအုံး အစ်ကို Raymond
Free Myanmar Message from Baekshin Hight School Students in Korea (June 23/2021)